Ixabiso eliphantsi le-Hydraulic Crawler eliQinisekisiweyo leNkunkuma ye-Organic yeVenkile yokuThengisa abaThengi kunye neFektri | YiZheng
Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Waste Composting Turner yoMatshini
Ukujija okuQhelekileyo kweNkunkuma yeNkunkuma yeKhomputha yokujika Ngumatshini oyingcali kumgquba womgquba kunye nezinye izixhobo zokucola. Yamkela inkqubo yokusebenza ephezulu ye-hydraulic, ukutsala intonga yokuqhuba amandla kunye nokusebenza kwendlela yokukhasa.
Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Composting Turner Machine Yeyona ndlela yokuvundisa yenqwaba yomhlaba, eyeyona ndlela yezoqoqosho isindisa umhlaba kunye nabasebenzi okwangoku. Izinto eziphathekayo kufuneka zifunjwe kwisitaki, emva koko loo nto ivuseleleke kwaye ityunyuzwe rhoqo ngamatshini ajikayo, kwaye ukubola kwezinto eziphilayo kuya kuba phantsi kweemeko zomoya. Ikwanomsebenzi owaphukileyo, ogcina ixesha elininzi kunye namandla abasebenzi, okwenza ukuba imveliso isebenze kunye nomgangatho wemveliso yesityalo sesichumiso sezinto eziphilayo siphuculwe kakhulu, kwaye iindleko zincitshiswe kakhulu.
Luyintoni uhlobo lwe-Crawler Type Organic Waste Composting Turner?
Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Composting Turner Machine sisixhobo esibaluleke kakhulu kwimveliso yezichumiso eziphilayo. Yamkela uyilo losasazo olulandelelweyo, olunokuqhutywa ngumntu omnye. Umsebenzi ungagqitywa kungekuphela nje kwiindawo ezivulekileyo, kodwa nakwiindibano zocweyo okanye zokugcina izindlu. Xa ifayile ye-Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Composting Turner Machine isebenza, udaka, umgquba wezilwanyana onamathelayo kunye nezinye izinto zinokuxhokonxwa kakuhle ngundo kunye nomgubo wengca, ukudala imeko ye-aerobic engcono yokuvundisa izinto. Ayiboli kuphela ngokukhawuleza kunodidi olunzulu lomjelo, kodwa ikwathintela ngokufanelekileyo ukuveliswa kweegesi eziyingozi nezinevumba ezifana ne-hydrogen sulfide, igesi ye-amine kunye ne-indole ngexesha lokuvumba, okuhambelana neemfuno zokukhusela okusingqongileyo.
Izinto eziluncedo zohlobo lweCrawler Composting Turner Machine
Olunye lophuculo lobuchwephesha Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Composting Turner Machine Kukudibanisa umsebenzi otyumkileyo wezinto kwinqanaba lokugqibela lokuvumba. Ngokuhamba okuqhubekayo kunye nokujika kwezinto, ishafti yesitshetshe inokuyityumza ngokufanelekileyo isigaxa esenziwe kwinkqubo yokubila kwempahla ekrwada. Akukho isityumzi eyongezelelweyo efunekayo kwimveliso, nto leyo iphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kwaye kunciphisa iindleko.
(1) Amandla ayi-38-55KW injini yedizili epholileyo yamanzi, enegunya elaneleyo, ukusebenza kakuhle kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwepetroli.
(2) Le mveliso iguqulwe yaza yahlulwa sisiqalo esithambileyo. (Ezinye iimveliso zasekhaya zohlobo olufanayo zisebenzisa i-iron kwi-clutch ekhuni, enomonakalo omkhulu kwikhonkco, ethwele kunye ne-shaft).
(3) Yonke imisebenzi ibhetyebhetye kwaye ilula. Lungisa umgama phakathi kwe-shaft shaft kunye nomhlaba ngenkqubo ye-hydraulic.
(4) Ifakelwe ngaphambili i-hydraulic push plat, ke akukho mfuneko yokuba uthathe imfumba ngesandla.
(5) Isinciphiso somoya.
(6) Umatshini wokufaka umgquba onamandla angaphezu kwe-120 enziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zomsebenzisi.
Uhlobo lwe-Crawler ye-Organic Waste Composting Turner yoMatshini weVidiyo
Uhlobo lwe-Crawler Composting Turner Machine Model
Ikaliwe isantya samandla
2400 ukujika / amanqaku
Imela Ububanzi Ububanzi
Isikwere esingu-600 ~ 800 / H
800 ~ 1000 isikwere / H.
Isikwere se-1000 ~ 1200 / H.
1000 ~ 1500 isikwere / H.
Egqithileyo Ityathanga leTyathanga Ukujika komgquba
Okulandelayo: Ukuphakamisa i-Hydraulic Composting Turner